#TEDxTana | GAZETY_ADALADALA | Page 2
#TEDxTana 2010: Fisaorana
Posted on 28/11/2010 by gazetyavylavitra
Ny eto amin’ny °Gazety_Adaladala dia maneho fisaorana feno ireo rehetra nitoto nahafotsy sy nahandro nahamasaka iny hetsika #TEDxTana 2010 natao tao amin’ny MDLC (Madagascar Development Learning Center) iny. Tsy adino amin’izany isika mpanotrona na teratany na vahiny.
Sedra voalohany ho anay mpitoraka bilaogy nanopme aina mivantana ny hetsika iny, ary tsorina fa dia nanao izay tratry ny aina sy izay kely mba vita ny rehetra tamin’ny fitorahana bolongana sy fandefasana Tweets nandritry ny hetsika.
Malagasy no nanomana ny hetsika, nefa azo lazaina fa tsy nitsanga-menatra na izany aza.
Be ny zavatra azon’ny mpanatrika, voaresaka tao daholo na ny zavakanto, na ny tontolon’ny asa, na ny toetr’andro sy ny tontolo iainana… Nahafinaritra ny tontolo nifaneraserana tao, ary ny tena tsy ho adino dia ilay namaranan’i Jean Emilien ny anjara fisehoana an-tsehatra nataony, ka niarahan’ny rehetra niredona ny « Maitso malama sy ny Ô rila e! »
Manako eran-tany ankehitriny ny #TEDxTana 2010, ary mbola hanako amin’ny lafiny tsara hatrany i #Madagascar
Mankasitraka ry zalahy a!
Filed under: #TED, #TEDxTana, aterineto, fiaraha-monina, haino amanjery, haitao, tapatapany, toetr'andro, tontolo iainana, tontolon'ny asa, Zavakanto | Tagged: #TEDxTana, MDLC |	2 Comments »
#TEDxTana 2010: Famelabelaran’i Beinvenu RAJAONSON – Banky Iraisampirenena
Iza moa i Bienvenu Rajaonson ?
Mpandray anjara fitenenana amin’ny #TEDxTana 2010 izy, izay atao eto amin’ny MDLC Anosy, Antananarivo, Madagasicara
Tomponandraikitra misahana ny resaka tontolo iainana ao amin’ny iraka maharitry ny Banky iraisampirenena eto Madagasikara.
Efa tomponandraikitry ny fandaharanasam-pirenena momba ny fambolena hazo
Tale mpanatanteraky ny Conservation International
Mpiandraikitra tetikasa ao amin’ny Banky Iraisampirenena
Énergie et genre
Énergie, environnement et changement climatique
Gestion des ressources ligneuses
Inona no nandrisika azy hiditra ho mpikambana amin’ny Riaed :
hizara ireo traikefa sy andrana natao teto Madagasikara
Niresaka momba ny famokarana sy ny fanodinana ny vokatra azo avy amin’ny fary mba hatao angovo fampiasa ao an-tokantrano izy nandritry ny #TEDxTana 2010.
Haka bahana kely ny mpanoratra dia ho hatavezina eto ihany ity resaka ity saingy efa azo atao ny mamaky azy amin’ny teny anglisy ato presentation TEDX final , Resaka alikaola io nefa aza manahy anefa ianareo mpisotro fa tsy hahalany ny toaka gasy tsy akory ny fampiasàna azy ho solika fandrehitra an-dakozia.
BP 4140, Banque mondiale 101 Antananarivo, Madagascar
Spécialiste principal environnement à la mission résidente de la Banque mondiale à Madagascar.
P.O.BOX 4140, Banque mondiale 101 Antananarivo, Madagascar
Courriel : brajaonson@worldbank.org
Compétences, parcours professionnel…
Responsable du programme national de reboisement
Directeur Exécutif Conservation International
Chargé de Projets Banque Mondiale
Motivation pour devenir membre du Riaed :
Partager les expériences conduites à Madagascar
Filed under: #TED, #TEDxTana, haitao, tapatapany, tontolo iainana, tontolon'ny asa | Tagged: #TED, #TEDxTana, Antananarivo, ETHANOL, Madagasikara, MDLC |	Leave a comment »
#TEDxTana 2010: Famelabelaran’i Mandrantoso Ndrianiaina – JOJOPIL Innovations
Mandrantosoa Ndrianiana, mpamorona ny JOJOPIL, orinasa manao tolotra mifandraika amin’ny resaka ingenierie informatique
jojopil! Innovations dia nitsangana tamin’ny Desambra 2007 ary manome vahana manokana ny orinasa Malagasy te ho hita bebe kokoa eo anivon’ny aterineto, amin’ny maha-orinasa Malagasy azy rahateo. Inona avy ohatra no applications fantatsika ka ampiasaina betsaka eto amin’ny aterineto: ireto no be mpahalala indrindra. facebook, webmail, forum, google apps, sns…
Ny tetikasa voalohany voajorony dia ny tananalife, izay ampiasainy koa ho toy ny fitsapàna maripàna. Niainga avy amin’io no nahatsapàny fa vitany tsara ny hamaly ny hetahetan’ireo tonga manatona azy.
Orinasa voalohany eto Madagasikara mampiasa ny Ruby on Rails, izay fitaovana entiny manafaingana ny asany ny Jojopil Innovations, miaraka amin’ny fanomezana tolotra manara-penitra sy avo kalitao ao ampandraisanao ny vokatra.
Afaka manao ny atao hoe etudes sy ny asan’ireny antsoina hoe consultants ireny koa ny jojopil! Innovations. ho an’ireo orinasa te hanatsara ny vokatra arosony!
Mandray anjara amin’ny #TEDxTana 2010 ety amin’ny MDLC Anosy, Antananarivo – Madagasikara ny Jojopil Innovations. Ary izy mihitsy aza no nanakinana ny fananganana sy ny fampandehanana ny tranonkalan’ny #TEDxTana 2010.
Famelabelarana nentiny kosa ny mikasika ny mbola azo ampiasana ireny solosaina antitra ireny ho azo ampiasaina ho toy ny vao indray, amin’ny alalan’ny fandrohizana azy rehetra ireny amin’ny fampiasana ny LINUX. Ny Linux izay voalaza nandritra ny fanolorana fa tsy laitran’ny balan’ny ‘virus informatika’. Fohy nefa nazava ary tsy nilana fampiasana saina henjana ny fanazavana nentina
Mandrantosoa de Jojopil, ilay bandy cool
Antananarivo Avaradrano, Analamanga 103
Filed under: #TED, #TEDxTana, aterineto, haitao, tapatapany, tontolo iainana, tontolon'ny asa | Tagged: #TED, #TEDxTana, Antananarivo, jojopil innovations, LINUX, Madagasikara, MDLC |	Leave a comment »
#TEDxTana 2010: Fandraisana anjaran’i Jean Emilien
Mombamomba an’i Jean Emilien Rakotonandrasana (nalaza tamin’ilay hirany hoe ‘Maintso malama’)
Teraka tamin’ny 03 septambra 1963 tao Ambalavao Tsienimparihy – Fianarantsoa ary taranaka mpiangaly zavakanto niara-nalevina tamin’ny jejy voatavony (ny raibeny). Nandritra ny fety an-tsekoly sy lanonam-pianakaviana nandraisany anjara no nahamarihan’ny olona azy voalohany sy nanohanana azy tamin’ny lafiny hira. Kabaosy (gitara nentindrazana Malagasy) no niantombohany teny am-piandrasana omby mandritry ny fotoam-pialantsasatra. RAMOMA Pauline no reniny. Indray andro dia nahatsikaritra mpitsoka farara iray izy, nanaraka ny hiran’ireo mpianatry ny rainy, RAVOAVY Jean.
Fianarantsoa, toerana niaviany
Sarotra ihany ny niaingany ho mpiangaly zavakanto satria tsy dia nankasitraka izany loatra ny rainy, izay nahavita mihitsy namotika ny kabaosy fitendriny teo an-tampon-dohany. Lalan-jotra hafa mantsy no noeritreretin-drainy ho tokony nizorany. Avy amin’ny lafin-dreny dia mpilalao » horija » sy « jejy voatavo » ary raha ny lafin-dray kosa dia mpiangaly « lokanga » sy « kabaosy ».
Teo amin’ny faha-17 taonany, rehefa nihevitra ho mahavita tena dia nandao ny tokantranon-dray aman-dreny. Mpitendritendry teny amin’ny toby fiantsonanan’ny fiara mpitatitra mampitohy faritany ireny izy taorian’izay.
Mbola zaza vao 5 taona i Jean Emilien ny 14 oktobra 1968 raha niaka-tsehatra voalohany tao amin’ny Kaominin’i Talatan’Ampano.
Fony mbola mpianatra, nandritra ny andro tsy fianarana, dia miaraka amina namana vitsivitsy izy miangaly ny mozikany. Saingy niha-sarotra ho azy ny mamory namana ka teraka tao aminy ny eritreritra hamatotra ny farara eny an-tendany mba hahafahan’ny tànany mitendry kabaosy; io fomba io no nahafahany mihira ka sady nitsoka farara no nitendry kabaosy. Ary teraka teo koa ny anaram-petaka hoe « L ‘ homme orchestre ».
Fiakarana an-tsehatra nandritra ny #TEDxTana 2010 miaraka amin'ilay « kabôsy » amin'ny endriny maoderina namboarin'i Jacob Aci, ilay nanamboatra ny gitara fitendrin'i Sting sy ry Kassav. Natao fanomezana ho azy izy iny fa tsy taka-bidy raha eny anivon'ny tsena no hividy azy i Jean Emilien.
Ny 5 febroary 1982 no nanao fandraisam-peo voalohany tao amin’ny RNM (Radio Nasionaly Malagasy) i Jean Emilien ka hira 10 tamin’io fotoana io no noraketina. Misy amin’ireo sangan’asany no lasa hira famantarana fandaharana mandeha ao amin’io fandefasampeo io. Isan’ireny ny « Handeha hiala voly » sy ny « Voromangan’i Gasikara »
Teo ny tahotra fony izy nentin’i Rossy niaka-tsehatra voalohany indrindra tao amin’ny KANTO Antanimena, nefa hoy izy tany an-tsainy tany hoe « Kabosy ity, azo atao amin’izay itiavako azy ». Nankafizin’ny mponin’Antananarivo avy hatrany anefa ny asa kantony ka nisy ny nanipy zavatra teny ambony lampihazo, izay noheveriny fa vokatry ny tsy hafalian’ny mpanotrona (satria nankimpiny ny masony mba hankaherezany tena nandritra ny hira nataony), saingy rehefa nahirany ny maso, dia akory ny hagagàny fa hay vola madinika ireo natsipin’ny olona ireo ho fankasitrahana azy.
Teny ambony sehatra nandritra ity #TEDxTana ity dia niantso ny rehetra i Jean Emilien mba hanampy azy hahatanteraka ny tetikasany ho fambolena hazo
Nandalo kely tamin’ny mozika tandrefana izy talohan’ny nilomanosany tao anatin’ny vako-pirenena, ny vako-drazana, ka ny rija no tena nifotorany na dia maro aza ireo gadon-kira malagasy (vakisaova, basesa, salegy, jejy, saranga). Ny tehaka (voasolon’ny kabaosy) sy ny angorodao ary ny don-tany no tena fampiasa ankehitriny, raha nitsinjaka narahan-tehaka tsy nisy mozika no fanao fahiny.
Mandrotsirotsy ny mpankafy azy ny feo an’orona sy maranitra fanaony, ravahan’ny farara sy ny kabaosy izay nampiany tadim-peo manokana mba hanakatra ny beso. Sady mahay mikabary ihany koa i Jean Emilien.
Niarahan'ny rehetra niredona ny "Maitso malama" sy ny " O Rila re e" teto amin'ny #TEDxTana 2010 androany
« Hey Madagascar » no rakikira voalohany nataony tany Parisy tamin’ny 1991 ary « Ezaka » tamin’ny 1995 no faharoa. Roa taona taorian’io dia nampitoviana tamin’i Robert Johnson, ilay rain’ny gadona « blues », izay fitaratr’i John Lee Hooker sy Eric Clapton izy rehefa nahazo ny Medaly Volamena nandritry ny fifaninanana mitsoka farara, « Hohner 91 », « Certificate of Honor for excellence in Diatonic tremolo by SPAH –IHO-HOHNER », taona 1991, Détroit, Etazonia. « Miandraza » tamin’ny 1998 no rakikira fahatelo.
cerificat of honnor
Efa imbetsaka izy no masoivohon’ny mozika Malagasy nanerana izao tontolo izao.
Gabon - Jona 2003
Indreto vitsivitsy amin’ireo hira malazany, izay azonao henoina sy alaina amin’ny aterineto:
Taty aoriana vao nisy ny fitiliana ireo talenta vao misondrotra eto Madagasikara (TVM, RTA), fa raha ny tamin’ny andron’i Jean Emilien no jerena dia tsy nisy mihitsy izany, ary ny vahiny aza no nandray anjara betsaka tamin’ny fanondrotana ny mpanakanton’ity Nosy ity tamin’izany fotoana.
Mandray anjara amin’ny #TEDxTana i Jean Emilien Rakotonandrasna amin’ity andiany 2010 ity.
Fifandraisana aminy :
Tel : +261 32 04 022 20 / +261 34 18 725 84
e-mail : feonandringitra@yahoo.fr
Filed under: #TED, #TEDxTana, Fanolorana, haitao, olo-manga, tapatapany, tontolo iainana, tontolon'ny asa, Zavakanto | Tagged: #TEDxTana, Ambalavao, Antanimena, basesa, Detroit, Eric Clapton, Ezaka, Fianarantsoa, Gabon, Hohner 91, horija, Jacob Aci, Jean Emilien, jejy voatavo, John Lee Hooker, KANTO, Kassav, lokanga, Madagascar, MDLC, Paris, RAMOMA, RAVOAVY, Robert Johnson, ROSSY, RTA, salegy, saranga, Sting, Talatan'Ampano, Tsienimparihy, TVM, vakisaova |	Leave a comment »
#TEDxTana 2010: Famelabelaran’i Tanswell Andrew sy Adriaan Mol – Toughstuff sy bushproof
Iza moa i Mol Adriaan?
Manampahaizana amin’ny asa fanaovan-gazety sy fifandraisana izy. Olona be kiry sy tsy mandositra olana. Néerlandais no fihaviany ary mpiara-manorina sy mpiara-mitantana ny ToughStuff ihany koa i Adriaan Mo. Ankoatra izay dia anisan’ny mpiara-manorina ny orinasa BushProof eto Madagasikara koa izy. Orinasa maninjara rano fisotro madio ho an’olona maro ary niroborobo tato anatin’ny 5 taona nisiany.
Taorian’ny niasany tamin’ny sehatra fanampiana iraisam-pirenena niarahana tamin’ireo ONG maro tany Afrika sy Azia dia izy no anisan’ny iray manerantany nahavita nanangana orinasa miroborobo mikarakara ny vondron’olona ifotony.
Efa nitàna ny toerana maro amin’ny maha-Tale tamin’ny Fikambanana Soisa antsoina hoe Medair, isan’ ireny ny eto Madagasikara. Isqn’ireo adalan’ny ady amin’ny fahantrana ihany koa, izay miezaka ny mampivady ny teknolojia sahaza ho an’ny lasi-pahantràna iray voafaritra. Nanangana orinasa madinika maro izay tsy mitsahatra ny miroborobo, misahana ny ara-pahasalaman’ireo sahirana. Efa nahazo koa ny loka natolotry ny Global Social Benefit Incubator ho an’ireo mpandraharaha mirotsaka amin’ny ara-tsosialy i Adriaan, loka natolotra tany amin’ny Anjerimanontolon’i Californie – Santa Clara, ary notohanan’ny Fondation Skoll tamin’ny taona 2006.
Adriaan Mol miteny manoloana ny mpanotrona ny #TEDxTana 2010
Nanazava izy mikasika ny fanaovana asa ho an’ny mahantra. Nolalovany tamin’izany ny antony tsy nahitana vokatra tamin’ireo asa fanampiana hafa rehetra efa nisy tany aloha. Satria tsy manana hatokona ny olona, Ilaina araka izany ny mampifanaraka ny zavatra tiana hatao amin’ny zava-nisy iainan’ireo vondron’olona ifotony raha tiana ny tsy hahamaty momokoa ny ezaka fanampiana entina hi azy ireny.
Momba ny fikisahany avy amin’ny naha-mpanao asa fanampiana asa-tsosialy azy ho amin’ny toeran’ny mpandraharaha ara-tsosialy no resaka eto. Teo aloha raha nanome maimaim-poana izy nefa tsy nahita vokatra maharitra, ankehitriny kosa mitdy vola avy amin’ny fahantrana izy, saingy ho amin’ny tombontsoan’izy ireny, hoy i Adriann.
Taona maro lasa izay, tao Somalia, toerana tsy alehany sy mampidi-doza dia nanangana fotodrafitrasa momba ny rano ho an’ny tanana iray ry zareo. Lafolafo ihany ny nenti-manana. Noheverina ho tetikasa hampiray ny vondrom-piarahamonina ilay izy saingy tany am-parany rehefa hiala ryzareo dia nifandritahana ny hoe iza no ho tomponysy hitantana ilay zava-bita.
Fotoana ela taty aoriana dia nanangana fanadiovan-drano kely tao Kenya izy ka nanofana olona roa, hamokatra sy hanadio rano ho ana fianakaviana an’arivony.
Mbola miodina ao ihany ny aferan-dry zalahy saingy efa sempotra ny tsena satria tsy afaka miitatra any amin’ny faritra hafa ila fanadiovan-drano noho izy atao amin’ny beton.
Dia nieritreritra izy hoe tsy mety ve raha mamokatra zavatra azon’ny mpaninjara amidy ho an’ny daholobe toy izay hijanona amina famokarana ho ana faritra iray monja?
Tsy mbola tanterany akory izay nokasainy dia nifindra taty Madagasikara izy mba hametraka fandaharanasam-pampandrosoana iray. Nandritra izany fotoana izany no nahaleo azy tsikelikely tamin’ny resaka fanaovana fanampiana izay matetika no tsy mitondra vokatra. Toy ity ohatra :
Firy tapitrisa sa firy lavitrisa no narotsaka tamin'itony làlana itony fa ny teo ihany o eo
Be ny mpamatsy vola tamin’ny resaka fanamboaran-dàlana. Vola be no narotsaka, saingy 3 taona aorian’izay dia ilay làlana dia efa tsy azo aleha intsony. Nahoana? Ny rafitra fikojakojana ny làlana amin’ny fampandoavana vola ireo mpampiasa azy dia tsy tonga tamin’ny tanjona noheverina satrianataon’ingahy ben’ny tanàna tay ampaosiny avokoa ny vola. Dia nanontany tena igahirainy raha toa ka misy orinasa afaka mitrandraka ara-barotra ny làlana toy izany, amin’ny alalan’ny fandoavana ny haba mifanaraka amin’izany – mbola tsy ho tratra ihany ve ny tanjona? Sa manana tombontsoa amin’ny famelàna ny làlana ho amin’izao ihany ry zareo?
Ity koa misy iray hafa. Tetikasa iray nandaniana 1 million USD ny nananganana toerana hahafahana mahazo rano fisotro madio, izay tokony ho ny vondrom-piarahamonina no hitantana azy. Dimy taona taty aoriana dia tapitra simba daholo ny paompy rehetra. Tsy ela akory izay dia nanatahana hanarina azy ireny ilay ONG nanangana azy ary amin’ny sanda 1% monja amin’izay nentina nanana ilay fotodrafitrasa, izany hoe 10,000 USD. Nadaboka ny tolotra satria voatazona amina fametrahana tetikasa vaovao hanomezana rano madio any amina faritra hafa ry zalahy, ary dia navela ho andraikitr’ ireo mpampiasa ankehitriny ireo paompy. Mazava loatra fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ilay rafitra fikarakarana ifotony nandaniana aina napetraka, ary manaiky i Adriaan fa tsy vahaolana akory izay hoe fanarenna maika kasaina hatao. Saingy amin’ny lafiny iray, fandanianiam-poana ny 1 tapitrisa dolara tao anatin’ny 5 taona izany..!
Maro no tahaka ireo ohatra roa naseho ireo! Ny ankamaroan’ireo asa fanampiana nahazona famatsiam-bola no tsy tafita ary tsy ahitana fiantraikany mivantana sy maharitra rehefa tonga ny fotoana ifaranany. Tsy milaza izany fa hoe tsy misy mihitsy ny tafita, misy fa vitsy dia vitsy. Tsara ny eritreritra hnampy, saingy famaritana iraisan’ny ankamaroan’ireny asa fanampiana ireny ny hoe « tsy maharitra ».
Fa maninona tokoa moa no sarotra ny fampandrosoana?
Any amina tanàna izay mbola isian’ny disadisa, sy sarotra ny fiainana, tsy misy te-ho tomponandraikitra ny olona. Nefa tsy misy fanampiana hahita vokatra maharitra anatin’ny fomba fiaina toy izany…
Ny ho an’ny tena aloha no ery anoloana “Ny tenako sy ny ankohonako aloha no fantatro, vao ny manodidina ahy sy ny fiarahamonina manontolo.”
Ohatra iray hafa ity, raha tonga tamina tanàna kely iray izy. Hitako mameno rano ny lavaka eo antokotaniny ny talena ONG iray raha tsy lavitra fa eo ivelan’ny misy azy eo ihany dia misy lavaka iraisan’ny besinimaro avelòany fotsiny eo. Sahirana ny tetkasan-dry zareo satria tsy misy olona miraharaha ary na izy aza dia mitovy toetra amin’ireo mponina eo an-tanàna ihany.
Tamin’ny taona 2005 dia nialàny ny sehatry ny ONG lka nandeha niara-nanangana ny BushProof i Adriaan, orinasa iray mitodika amin’ny lafiny sosialy eto Madagasikara.
Nihevitra izy sy ilay mpiara-miasa aminy fa afaka anampiana ny mahantra mba hanana tahirim-bola ny resaka rano madio. Nandramany araka izany ny nivarotra fanivanan-drano miisa 1 tapitrisa, ka nakàny tombony 1 dolara isanisany (betsaka ihany izany raha ny mahantra no resahana an!). Niaro olona 6 tapitrisa tamin’ny aretina izany nefa koa nampanjary mpanampitrisa an-dry lerony!
Iza moa i Tanswell Andrew?
Mpianatra mendri-piderana tao amin’ny Imperial College – Londres ary nahazo diplaoma tao. Lasa Injeniera mekanika tato aoriana. Teratany Britanika mpiara-namorona sady Tale Jeneralin’ny ToughStuff i Andrew Tanswell, ilay orinasa fantatsika eto Madagasikara amin’ny fanapariahana ireny fitaovana mandeha amin’ny herin’ny masoandro ireny sy amin’ilay teny filamatra rehefa manao dokam-barotra manao hoe ‘Hazavana maimaim-poana e,..Omeo anay, omeo anay…‘ iarahana amin-dry zalahy ao amin’ny tarika Fou-Hehy. Orinasa mitodika amin’ny ara-tsosialy mijery manokana ireo sahirana ara-pivelomana. Ilay adalan’ny ady amin’ny fahantrana.
Andrana mivantana amin'ny fandefasana radio amin'ilay fitaovana amidin'ny Tougtstuff
Mpikambana ao amin’ny TBN (Transformational Business Network), sady mpiara-miasa ao amin’ny Shaftesbury Partnership .
Efa niasa ho ‘Fakàn-kevitra mikasika ny fomba fitantànana’ tamin’ireny orinasa lehibe maro rantsana manerantany ireny, ka isan’ny fahalalàna manokana nandraisany anjara tamin’izany ny fitantànana ny fiovaovàna sy ny fivoaran’ny fandraharahana ary ny tetikady hiatrehana azy ireny. Taorian’io izy no nanangana ny asa fihariany manokana tany Royaume-Uni izay namidiny taty aoriana kely mba hahafahany mifantoka bebe kokoa amin-javatra hafa tsy voatery ho sandaina vola foana. Isan’ny efa nataony koa ny niasa tamin’ireny sehatra fanampiana iraisam-pirenena ireny toy ny tany Somalie sy Irak, niarahany tamin’ny masoivoho mpanao asa famonjena Medair. Nitana toerana maro tamin’ny sehatry ny varotra sy ny maha-olona i Andrew ka isan’ireny ny nametrahana sy ny nanamarinan-toerana ny Micah Challenge UK, masoivoho kristiana manerantany miandraikitra resaka famoronana, fananganana ary famarotana.
Tamin’ny taona 2009 dia isan’ny nahazo ny loka natolotry ny Global Social Benefit Incubator ho an’ireo mpandraharaha mirotsaka amin’ny ara-tsosialy i Andrew, loka natolotra tany amin’ny Anjerimanontolon’i Californie – Santa Clara, ary notohanan’ny Fondation Skoll.
Eo amin’ny sary: ankavia miankavanana, i Adriaan Mol (toughstuff /bushproof) sy i Andrew Tanswell (toughstuff) tamin’ny fanolorana ny loka TECH award 2010
Filed under: #TED, #TEDxTana, aterineto, haitao, tapatapany, tontolo iainana | Tagged: Adriaan Mol, Andrew Tanswell, Global Social Benefit Incubator, Imperial College, Madagascar, MDLC, Medair, Santa Clara, Skoll, Toughstuff & bushproof, Transformational Business Network |	Leave a comment »
#TEDxTana 2010: Famelabelaran’i Anja Besson – Designer
Iza moa i Anja Besson Rasolondraibe
Anja Besson seriny aminìny fanazavana
Isan’ny mpandray anjara fitenenana mandritra ny #TEDxTana 2010 Anja Besson Rasolondraibe
Metisy franco-Malagasy. 28 taona amin’ity 2010 ity, graphiste free-lance miasa miaraka amin’ireo fikambanana ara-kolotsaina samihafa rehefa avy nianatra momba ny zavakanto, ary nahazo diplaoma avy amin’ny NABA School of art ao Milan, Italie.
Ny rainy no nampianatra azy ny resaka hosodoko. Mbetika styliste, graphiste, scénographe de boutique amin’reny toeram-pivarotana ireny …Araka izany dia tsy hoe nandeha ho azy sy nisosa milamina akory ny làlana nodiaviny: nitady sy nanangona traikefa teny rehetra teny… Loharanom-pahalalàna daholo ny zavatra rehetra.
Adino teto ny hoe D..toy ny Dizina...
Japoney no nanao an'io saingy nanamarika azy manokana
Asa kanto mifototra amin’ny olona sy ny tsirairay ary ny zavatra tsapa rehefa mihaona amin’izy ireny no ataony ka betsaka ny fomba ampiasainy hanehoana ny mampiavaka ny tsirairay amin’izany. Collage, taratasy, baoritra, loko menaka, encre de chine, loko atsifotra (bombe) … miezaka ny tsy hilatsaka any amin’ny graffiti mitratrevatreva anefa.
Mifamatotra akaiky ny graphisme sy ny sary. Ny graphiste tsy hoe olona iray miangaly solosaina fotsiny mba hanome endrika pejy iray, afaka ny ho mpanao hosodoko, na sary sikotra koa izy…Aleo mihetsika toy izay mitantara. Tena ilaina ny manomboka amin’ny fanaovana sary aloha, vao miasa mivantana amin’ny solosaina.
Rehefa hisafidy ny haingo dia ny graphiste no tsy maintsy manome soso-kevitra mikasika ny sary natao tanana, na saripika, na typographie. Izany no ilazana fa ilana asa be sy fahamatorana ary saina mahataka-davitra ny graphisme. Ny fitiavana mikarokaroka izany no tena mibaiko…Antony iray safidiny hanao ity asa ity izany…Ary amin’ny asa toy izao, tsy misy zavatra efa tonga dia azo antoka…mila mitozo amin’ilay asa ary manao fanandramana, hoy hatrany izy.
Fanovana natao ho an'ny Café de la Gare
Hafatra voalohany indrindra raha te-hanao ity asa ity dia ny fanarahana fiofanana momba ny resaka graphisme amin’ny fomba tranainy, vao miditra amin’ny solosaina … graphisme fa tsy PAO. Io dia ampiarahana amion’ny fahalalana ankapobeny, ara-javakanto sy ny lalàna mifehy.
Tena zava-dehibe ny fahaizana mampiasa ny mason’ny tena mba hanakàrana ny teknika nampiasain’ireo graphiste hafa satria indraindray tena manahirana tokoa ny mpanjifa. Ho namanao mahatoky amin’ny fanatanterahana ny asa ireny rehetra ireny.
Seza tonta norakofana bemiray, ary mbola azo namidy lafo tsara mihitsy avy eo
Hafatra faharoa: mila manana faharetana, indrindra manoloana ireo mpanjifa sarontsarotiny izay efa manana ny noheveriny any anaty lohany any …
Mandany ron-doha, mandany fotoana, ary manimba vao manorina...
Tsy maintsy mahay mandresy lahatra, manana risi-po hanazava amin’izy ireny fa hoe ny graphiste dia afaka manolotra hevitra hafa ary indrindra tsy tokony hanaiky resy amin’ny lafiny karama.
Ato daholo no miainga izany rehetra izany
Filed under: #TED, #TEDxTana, haitao, tapatapany, tontolo iainana, tontolon'ny asa, Zavakanto | Tagged: #TED, #TEDxTana, Anja Besson, Italie, MDLC, Milan, NABA School |	Leave a comment »
#TEDxTana 2010: Famelabelaran’i Alice plane – Ashoka
Iza moa i Alice Plane?
Alice Plane dia manampahaizana amin’ny Siansa politika sy ny varotra, nianatra momba ny Fifandraisana Iraisam-pirenena sy ny Fitantanan-draharaham-bahoaka, mpianatra fahiny tao amin’ny ESSEC, teraka tao Lille, Frantsa tamin’ny 1984. Nipetraka tany Angletera ary nivezivezy matetika tany amin’ny Firasana Sovietika teo aloha. Fampianaran-kariva no nianarany ny teny Rosiana.
Miasa ho an’ny Fikambanana iraisam-pirenena Ashoka (www.ashoka.fr), izay manohana ireo mpandraharaha mitodika amin’ny ara-tsosialy izy. Eto Antananarivo izy ankehitriny no monina ary miandraikitra iraka ho fametrahana ny Ashoka eto Madagasikara rehefa sodokan’ny hatsaran-tarehin’ny Nosy sy ny otrik’harena maro toa tsy ho lany ananany. Eo koa ny fahaiza-manao nentin-drazana sy ny asa-tanana Malagasy, mandalo kely amin’ireo saina tia mikarokaroka symampivanaka annan’ny Malagasy
Lakana roa nakambana ary nasiana seza eo amboniny io asehon’ny sary etsy ambony io.
Milaza i Alice fa mbola manana ny hoaviny ny entrepreneuriat eto Madagasikara, saingy ny olana dia ny tsy fifampitokisan’ireo samy mpitondra tetikasa, na dia samy milaza ho entreprneurs sociaux aza izy ireny.
Isan’ny nanohina ny fony ny fahitàna ny fahantran’ny mponina sy ny tsy fanjarian-tsakafo. indrindra fa eny an-tanan-dehibe. Ny sary eto ambany dia nalainyta an-tananan’Antsirabe.
Mba mangataka re tompoko fa noana e!
Teo koa ny fahitana fa tsy ny ankizy rehetra no afaka miditra varavaran-tsekoly, izay mazana aza no mbola fandaharam-pianarana tsy mifandraika amin’ny zava-misy koa, ary mahatratra 40% ny taham-pandaozana toeram-piasàna ataon’ireo mpampianatra (Afa-baraka aho Gasikara keliko! Sa lasa namboly fa tsty ampy sakafo ry zareo?)
NY FIJERINAY : « Ny tsirairay dia afaka ny ho mpandray anjara amin’ny fanovàna ».
NY ASANAY : Mirotsaka an-tsehatra amin’ny fametrahana rafitra sy fampivoarana ny sehatra Entrepreneuriat Social manerana izao tontolo izao, mba hisy bebe kokoa ny fiantrakany eo amin’ny fiarahamonina.
IREO TANJONAY 3 LEHIBE MIFAMENO :
Mifantina sy manaraka azy ireny mandritra ny dingam-pivoaran-dry zareo, indrindra fa ireo mitondra fiovàna;
Mandray anjara amin’ny fampivelarana ny sehatry ny Entrepreneuriat social erantany amin’ny fanomezana fandaharan’asa sy fampandraisana andraikitra – toy ny Concours IMPACT de business plans à vocation sociale, programme Jeun-E-S, Global Academy, sns…
Sary avy amin’ny Ashoka ny sasany amin’ireo hitanao tato
Filed under: #TED, #TEDxTana, Fanolorana, haitao, tapatapany, tontolo iainana | Tagged: #TEDxTana, Alice plane, Angletera, Antananarivo, Ashoka, ESSEC, Firaisana Sovietika, Lille, Madagascar, MDLC |	Leave a comment »